NeChishanu, Kurume 25, 2022 NeChishanu, Kurume 25, 2022 Alexander Frolov
Makumi gumi apfuura akashanda seimwe yekukura kukuru kwekusimudzira kushambadzira, kurimisa seyanofanirwa-kuva nehurongwa hwemhando mukuedza kwavo kubatana nevateereri vavo. Uye chikumbiro chayo chakamisikidzwa kuti chirambe chiripo sezvo mamwe mabhureki anotarisa kubatana nevanokurudzira kuratidza huchokwadi hwavo. Nekusimuka kwesocial ecommerce, kugoverazve kwekushambadzira kwekushandisa kupesvedzera kushambadzira kubva kuterevhizheni uye offline midhiya, uye kuwedzera kutorwa kwead-blocking software iyo inokanganisa.
Chishanu, February 18, 2022 Muvhuro, Kukadzi 21, 2022 Douglas Karr
Isu takavaka kunze Shopify Plus saiti yemutengi ine akati wandei marongero ezvitaera zvavo mune chaiyo theme faira. Nepo izvo zvine pundutso pakugadzirisa masitayipi zviri nyore, zvinoreva kuti hauna static cascading style sheets (CSS) faira raunogona kurerutsa (kuderedza saizi). Dzimwe nguva izvi zvinodaidzwa seCSS compression uye kumanikidza CSS yako. Chii chinonzi CSS Minification? Paunenge uchinyorera kune stylesheet,